शिल्पा र र र्दुगेशको “कति अभागी” (गीत)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
शिल्पा र र र्दुगेशको “कति अभागी” (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित लोकप्रिय गायिका अन्जु पन्तको “कति अभागी” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतमा एक नारायण भण्डारीको शब्द तथा संगीत रहेको छ । माया प्रेमको भाव समावेश गरिएको उक्त गीतमा मायामा धोका हुदाँको पिडालाई समावेश गरिएको छ । नायिका शिल्पा पोखरेल र र्दुगेश थापाको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो जय रेग्मीले छायाँकन गरेका हुन् ।
नायिका शिल्पा पोखरेल र र्दुगेश थापालाई एक माया गर्ने जोडीको रुपमा देखाइएको उक्त गीतको भिडियोमा उनीहरु बिछोडलाई देखाइएको छ । रन्जित कुमार क्षेत्रीको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई टेकेन्द्र शाहले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : उद्धब र पार्वतीको “उही संग बिहे गर” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायिका पार्वती कार्की र गायक उद्धब कार्कीको “उही संग बिहे गर” बोलको लोकदोहोरी गीत सार्बजानिक भएको छ । संगम थापा र पार्वती कार्कीको शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा पवन वाङको एरेंज रहेको छ । दुई प्रेमीको पिडा समावेश गरिएको उक्त गीतमा मायाको भलाई होस् भन्ने कुरा गरिएको छ । अनु पराजुली , बिक्रम थपलिया , रिता थापा , उद्धब कार्की , पूर्णप्रसाद ढुंगाना , राधिका संजेल तथा बाल कलाकार रिदम सुबेदी र प्रितिका पौडेलको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो बिरेन्द्र भट्टले छायाँकन गरेका हुन् ।
गीतको भिडियोमा एक माया गर्ने जोडीलाई देख्न सकिन्छ । प्रोसिस तिमल्सिनाको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई अनिल रानाले सम्पादन गरेका हुन् । गीतको भिडियो शिवपुरी म्युजिक प्रालिले निर्माण गरेको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : अन्जली फिर्चड “तिम्रै नामको शहर” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक नारायण बाबु कोइरालाको “तिम्रै नामको शहर” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । रोशन श्रेष्ठको शब्द रहेको उक्त गीतमा कल्याण सिंहको संगीत रहेको छ भने दिनेश श्रेष्ठको एरेंज रहेको छ । मन टुटेको कुरा गरिएको उक्त गीतमा आफ्नो मायालुले मनको कुरा नबुझको कुरा गरिएको छ । अन्जली अधिकारी , समिर तामाङ र जीवन शाहीको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो उत्तम हुमगाईले छायाँकन गरेका हुन् ।
गीतको भिडियोमा एक नारीको पिडालाई देखाइएको छ भने भिडियोमा मायालुले मनको कुरा नबुझदाको पिडा देख्न सकिन्छ । जीवन शाहीको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई नविन निरौलाले सम्पादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रविशा र सागरको “माया प्रितीको” (गीत)
फिल्मी फण्डा । लोकप्रिय गायिका प्रविशा अधिकारी र गायक सागर अधिकारी ‘शरद’को “माया प्रितीको” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । डा.डीआर उपाध्यायको शब्द रहेको उक्त गीतमा गायक सागर अधिकारी ‘शरद’को नै संगीत रहेको छ भने शाहस शाक्यको एरेंज रहेको छ । माया पिरतीको शब्द रहेको उक्त गीतमा मायालु आएपछि जीवनमा खुसी आएको कुरा गरिएको छ ।
अनु पराजुली र डा. डीआर उपाध्यायको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो अर्जुन सापकोटाले छायाँकन गरेका हुन् । गीतको भिडियोमा एक माया गर्ने जोडीलाई माया बाढ्दै देख्न सकिन्छ । वसन्त सापकोटाको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई अनिल कुमार महर्जनले सम्पादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : टिकटकका प्रिज्मा र प्रिन्सीको “अमिलो निबुवा” (गीत)
फिल्मी फण्डा । लोकप्रिय गायिका निकिता थापा र जीवन रसाईलीको “अमिलो निबुवा” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । दिपक सिलवालको शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा कुसल सिंहको एरेंज रहेको छ । हाम्रो माया जिन्दावाद बोलको गीतको सफलता पछि सार्वजनिक भएको उक्त डान्सिङ गीतमा माया पिरतीको भाव समावेश गरिएको छ । टिकटकका ट्वीन गर्लस् प्रिज्मा खतिवडा र प्रिन्सी खतिवडा , दीपा श्रेष्ठ र दमन्ता श्रेष्ठ , शिशिर भण्डारीको साथ मिलन शंकरको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो नबराज उप्रेतीले छायाँकन गरेका हुन् ।
गीतको भिडियोमा प्रिज्मा खतिवडा र प्रिन्सी खतिवडा , दीपा श्रेष्ठ र दमन्ता श्रेष्ठ , शिशिर भण्डारीको साथ मिलन शंकरको निकै राम्रो नृत्य देख्न सकिन्छ । जीवन रसाईलीको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई नविन निरौलाले सम्पादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : राजेशको “पछयौरी” गीत)